Amanyathelo okukhula kwabafundi nokuba ngaba abafundi bakwinqanaba eliphezulu lokuba nobuchule, okanye ukugcina ubungakanani, kubugcisa besiNgesi / kuLwimi kunye neMathematics kwimigangatho yemfundo kwisithuba seminyaka emine. Ipesenti yokuKhula kwabafundi (SGPs) isetyenziselwa ukumisela ukuba ngaba abafundi bakhula ngokwaneleyo na ngonyaka ukufikelela kwezi thagethi. Ii-SGPs zichaza ukufunda komfundi xa kuthelekiswa nabanye abafundi ababelana ngembali efanayo yokusebenza, nokuba ngumfundi &#39;oontanga bakhe.&#39; Kuphela ngabafundi abaneziphumo zovavanyo ezimbini ezilandelelanayo ezichitha uninzi lonyaka wesikolo ezibhalisiweyo esikolweni ezibandakanyiweyo xa kunikwa ingxelo yokukhula kwabafundi. (Umthombo wedatha: unyaka wesikolo ka-2018-2019)
Yeyiphi ipesenti yabafundi kwesi sikolo abaye bahlangana okanye bagqitha kwithagethi yabo yonyaka yokukhula?
Amanyathelo okukhula kwabafundi nokuba ngaba abafundi bakwithagethi yokufumana ubungcali okanye ukugcina ubungakanani bobugcisa besiNgesi / boLwimi kunye neMathematics.
IsiNgesi / ubugcisa boLwimi
IsiNgesi / ubugcisa boLwimi Ibanga 3-8
I-avareji kaRhulumente 62.4%
IsiNgesi / ubugcisa boLwimi Ibanga le-10
Owona msebenzi uphantsi uphantsi ngama-25% abafundi kumaBanga 3-8
I-avareji kaRhulumente 33.6%
IsiNgesi / ubugcisa boLwimi Owona msebenzi uphantsi uphantsi ngama-25% abafundi kumaBanga 3-8
IMathematics Ibanga 3-8
I-avareji kaRhulumente 35.7%
IMathematics Ibanga le-10
Owona mgangatho uphantsi wenza i-25% yabafundi babafundi kumaBanga 3-8
I-avareji kaRhulumente 17.1%
IMathematics Owona mgangatho uphantsi wenza i-25% yabafundi babafundi kumaBanga 3-8
Benza njani abafundi xa kuthelekiswa nethagethi yethutyana yeli lizwe yokukhula ukuya kubuchule?
Iithagethi zethutyana zibonisa inkqubela phambili elindelekileyo efunekayo ukufezekisa iinjongo zexesha elide zikarhulumente zokukhula zikhulele ekufundeni.
Lithini inani lokukhula kwabafundi kwesi sikolo?
Iipesenti zokukhula kwabafundi zimele inani leenkqubela phambili zabafundi ezenziweyo kunyaka othile xa kuthelekiswa nabanye abafundi abanembali efanayo yokuphumelela kwezemfundo.
IsiNgesi / uLwimi lwezoBugcisa kuLwimi oluPhakathi Ukukhula kwePesenti kumaBanga 3-8
IsiNgesi / uLwimi lwezoBugcisa kuLwimi oluPhakathi Ukukhula kwePesenti yeBanga le-10
Ipesenti yokuKhula kweMathematics Medium ukukhula kwamaBanga 3-8
IPesenti ye-10 ye-Mathematics yoLukhula